မြန်မာ့ခရီးစဉ်ဒေသငါးခု၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြင့် စမ်းသပ်လွှင့်တင် | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Technology » မြန်မာ့ခရီးစဉ်ဒေသငါးခု၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြင့် စမ်းသပ်လွှင့်တင်
မန္တလေး၊ မေ- ၆
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည့် မန္တလေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များဖော်ပြထားသော ၀က်ဘ်ဆိုက်
မြန်မာ့ခရီးစဉ်ဒေသငါးခုကို နိုင်ငံတကာက ပိုမိုသိရှိနိုင်စေရန် ဒေသ တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဝက်ဘ်ဆိုက် များကို ဂျပန်၊ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာ ဖြင့် စမ်းသပ်လွှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန် ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန် သည်။
မန္တလေး၊ ငပလီ၊ မွန်၊ တနင်္သာရီနှင့် အင်းလေးဒေသခရီးစဉ်ဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို မေလ ၁ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ စမ်းသပ်လွှင့်တင်မည်ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၁ ရက်ကစ၍ တရားဝင်လွှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
‘‘ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ လွှမ်း မိုးမှုအရှိဆုံး ကိရိယာတစ်ခုဖြစ် သလို ကုန်ကျစရိတ်လည်း သိပ် မများဘဲနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု လည်းရှိတယ်။ Update တွေ လည်း အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီပေးနေ လို့လည်း ရတယ်လေ။ ခုချိန်ဆို ပိုအရေးကြီးတာပေါ့။ မြန်မာပြည် ရဲ့ Update အခြေအနေတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ တင်ပေးနေဖို့ လိုတယ်လေ။ အခု ဝန်ကြီးဌာနက နေ လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ဒေသတွေက လည်း အဓိကခရီးစဉ်ဒေသတွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် အဲဒီဒေသရဲ့ အခြေ ခံသတင်းအချက်အလက်တွေကို လည်း လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရှာလို့ရ လာနိုင်တာပေါ့’’ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားဈေးကွက် မြှင့်တင်ရေးအ သင်း ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စုစုတင်က ပြော ကြားသည်။
အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ တွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသများ၏ သမိုင်းကြောင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီး သွားဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အ လက်များ၊ သွားရောက်လည်ပတ် နိုင်သည့် နေရာများ၊ ဒေသအစား အစာများ စသည်တို့ကို ကဏ္ဍအ လိုက် ဖော်ပြထားသည်။
‘‘သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအလိုက် ကို သူတို့ဘာသာ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေး လိုက်တဲ့သဘောပေါ့။ ဒီဝက်ဘ် ဆိုက်ကို တိုက်ရိုက်လွှင့်သလိုပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပါ ခွဲခြားလုပ် ကိုင်ခွင့်တွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင် ခရီး စဉ်ဒေသတစ်ခုမှာ ဖြစ်နေတဲ့ဟာ တွေကို နေပြည်တော်က တိုက် ရိုက်မသိနိုင်တဲ့အတွက် ဒါမျိုးဆို ရင် ပိုကောင်းတယ်လေ။ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုပြီး တင်နိုင်တဲ့ အခါ သူတို့ဒေသတွေအကြောင်း ကို ပိုပြီးတော့ မြင်သာလာတာ ပေါ့။ ဒါက ကောင်းတဲ့ အပြောင်း အလဲပါ’’ဟု Nature Dream ခရီး သွားလုပ်ငန်း မန်နေဂျင်းဒါရိုက် တာ ဒေါ်စံပယ်အောင်က ပြော သည်။
ဝန်ကြီးဌာနက လွှင့်တင်ပေး ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်ဒေသအလိုက် ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည် မန္တလေး တိုင်းအတွက် www.traveltoman dalay.com၊ အင်းလေးအတွက် www.traveltoinlay.com၊ မွန် ပြည်နယ်အတွက် www.travelto mon.com၊ တနင်္သာရီတိုင်းအ တွက် www.traveltotanintharyi. com နှင့် ငပလီအတွက် www. traveltongapali.com တို့ဖြစ် သည်။